बंक हानेका १५ न्यायाधीशलाई ठुलो झट्का, पद नै जाने ख'त'रा !
बंक हानेका १५ न्यायाधीशलाई ठुलो झट्का, पद नै जाने ख’त’रा !
काठमाडौं – इजलास बंक हानेका १५ न्यायाधीशलाई झट्का लागेको छ । उनीहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पुगेको छ ।
आज १५ जना न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको हो । न्यायाधीशहरुले इजलासमा सहभागी नहुँदा न्याय प्रभावित भएकाले न्यायमा असर पर्नेगरी कार्य नगर्न – नगराउन माग गर्दै तीनवटा रिट आएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
उनले रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । स्वागत नेपाल, कृष्ण प्रसाईंलगायत अधिवक्ताहरुले लिएर गएको रिटमा न्यायाधीशहरु इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित तत्काल सुनुवाइ नहुँदा न्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएर भाग मागेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भाग खोज्दा अदालतको बदनाम भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । ‘म नियम, कानुन अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको हुँ ।’
न्यायाधीशहरुसँगको छलफलमा उनले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने पनि विभिन्न प्रक्रियाहरु छन् । ति प्रक्रियाबाट मलाई हटाए हुन्छ । म राजनीनामा दिन्न ।’
उनको आशय प्रतिनिधिसभाका महाअभियोग लगाएपनि आफू सामना गर्न तयार रहेको भन्ने बुझिन्छ । उनीमाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्णय गरेका छैनन् ।